ခရီးသွားလုပ်ငန်းကိုကယ်တင်ရန် QR ကုဒ်များပြုလုပ်နည်း
tourism QR ကုဒ်များဖြင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းကိုမည်သို့တိုးမြှင့်ရမည်ကိုလေ့လာပါ။
Q QR ကုဒ်များသည်ခရီးသွားလုပ်ငန်းကို coronavirus မှအဘယ်ကြောင့်ကယ်တင်နိုင်ကြောင်းရှာဖွေပါ။
ခရီးသွားလုပ်ငန်းအတွက် QR Code လုပ်ပါ
ကမ္ဘာအနှံ့ရှိနိုင်ငံများနှင့်မြို့ကြီးများသည်ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားများနှင့်ဒေသခံများ၏အတွေ့အကြုံကိုမြှင့်တင်ရန် QR ကုဒ်များကိုအသုံးပြုနေကြသည်။ အသုံးပြုမှုကိစ္စရပ်များသည်မြို့ပြမြေပုံများနှင့်သမိုင်းလမ်းညွှန်များမှသည်ငွေပေးချေမှုအထိအခမဲ့ဖြစ်သည် WiFi QR ကုဒ်များ.
လူမှုရေးအရဝေးကွာသွားခြင်းနှင့်အတူခရီးသွား locations ည့်နေရာအများအပြားသည်ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှုကိုအကြီးအကျယ်ခံရသည်။ ဤအချက်ကြောင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းအများအပြားသည်မြေပုံအတွက် QR ကုဒ်များနှင့် WiFi အတွက် QR ကုဒ်များကဲ့သို့အဆက်အသွယ်မရှိသောနည်းပညာဖြေရှင်းနည်းများကိုအသုံးပြုခြင်း၏တန်ဖိုးကိုသိမြင်စေသည်။ နိုင်ငံအများစုတွင် QR ကုဒ်များကိုတက်ကြွစွာဖန်တီးနေကြသည် QR Code Maker လူတိုင်းရဲ့ဘ ၀ ကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ဖို့၊ သူတို့နဲ့ပိုပြီးချိတ်ဆက်ဖို့။
COVID-19 coronavirus အခြေအနေပြိုလဲပြီးနောက်ကမ္ဘာအနှံ့ခရီးသွားလုပ်ငန်းသည်ပွင့်လင်းလာသည်။ မည်သည့်ဗိုင်းရပ်စ်မဆိုဖြစ်ပွားခြင်း၏အန္တရာယ်များကိုလျှော့ချရန်အတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည်ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည့်အမိန့်နှင့်စည်းမျဉ်းအသစ်များကိုစတင်စဉ်းစားလာကြသည်။ ဆိုလိုတာက:
ခရီးသွားလုပ်ငန်းအတွက် QR သင်္ကေတများ
ဤ QR Code သည်ခရီးသွား ists ည့်သည်များကိုတာလင်းမြို့ဟောင်း၏ညအလင်းရောင်များကိုမိုဘိုင်းဆင်းသက်နိုင်သည့်စာမျက်နှာသို့လွှဲပြောင်းပေးခြင်းဖြင့်ရှာဖွေစေသည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့တာလီဘန်ခရီးစဉ်ကိုအက်စ်တိုးနီးယား၊ Skype၊ Pipedrive နှင့်အခြားအောင်မြင်သောအွန်လိုင်းဖွင့်လှစ်သောကုမ္ပဏီများမှစတင်ကြပါစို့။ ၎င်းသည်ဥရောပမက္ကာနည်းပညာဖြစ်သည်။ QR ကုဒ်များသည်ခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့်အခြားသောအသုံးပြုမှုနှစ်ခုလုံးအတွက်အက်စတိုးနီးယားတွင်အလျင်အမြန်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ထားသည်။
အပေါ်ကဥပမာမှာ Tallinn မြို့ဟောင်းက info တက်ဘလက်တစ်ခုမှာအံ့သြဖွယ်ညနေခင်းအလင်းရောင်ပြသနေပုံကိုကျွန်တော်တို့တွေ့နိုင်တယ်။ ပြproblemနာမှာယနေ့ခေတ်ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားများအနေဖြင့်စာလုံးရှည်များကိုဖတ်ရန်နှောင့်နှေးကြန့်ကြာခြင်းနှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်နှင့်စွဲငြိဖွယ်ရာအတွေ့အကြုံကိုပိုနှစ်သက်ကြသည်။ ဤပြနာကို QR Code ဖြင့် အသုံးပြု၍ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားများအားအလင်းရောင်ပြပွဲ၏မိုဘိုင်းဆင်းသက်မှုစာမျက်နှာသို့လွှဲပြောင်းပေးသည်။ သင်ထွက်စစ်ဆေးနိုင်သည် ဒီမှာ Tallinn မြို့ဟောင်းခရီးသွားလုပ်ငန်းစာမျက်နှာ.
ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်များအတွက်အဘယ်ကြောင့် QR ကုဒ်များသုံးပါသနည်း
QR ကုဒ်များ၏အဓိကကောင်းကျိုးများအနက်တစ်ခုမှာသူတို့သည်ထိတွေ့မှုကင်းသောဆက်သွယ်မှုမရှိသောဖြေရှင်းချက်တစ်ခုဖန်တီးနိုင်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ QR Code ကိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံနှိပ်စက်သို့မဟုတ်ဖန်သားပြင်ထဲသို့ထည့်ခြင်းအားဖြင့်လူတိုင်းသည်၎င်းတို့ဖုန်းမှ ၄ င်းကို scan ဖတ်ရုံဖြင့်အချက်အလက်များကိုအဝေးမှကြည့်ရှုနိုင်သည်။ QR Code ကိုမည်သို့စကင်ဖတ်ရမည်ကိုသင်ပိုမိုစိတ်ဝင်စားပါကကျွန်ုပ်တို့၏အသေးစိတ်သုံးသပ်မှုကိုစစ်ဆေးပါ အကောင်းဆုံး 12 QR Code Scanning app များ။ QR ကုဒ်များသည်စကင်ဖတ်စစ်ဆေးရန်လုံလောက်သောပမာဏရှိရန်လိုအပ်သော်လည်း၎င်းသည်စကင်ဖတ်စစ်ဆေးမှုအကွာအဝေးပေါ်တွင်မူတည်သည်ကိုသတိရပါ။ နောက်ရှုထောင့်တစ်ခုကတော့ပုံနှိပ်ခြင်းအရည်အသွေးဖြစ်သည်။ ဤပြissueနာကိုဖြေရှင်းရန်ကျွန်ုပ်တို့သည် QR Codes များကို vector format များတွင်အသုံးပြုရန်အမြဲတမ်းအကြံပြုပါသည်။ (.SVG, .PDF, သို့မဟုတ် .EPS)
ဤခရီးသွားမဂ္ဂဇင်း QR Code သည်သင့်အားဒစ်ဂျစ်တယ်ခရီးသွားလမ်းညွှန်နှင့်မြို့ကိုစူးစမ်းလေ့လာရန်သင်လိုအပ်သမျှကိုပေးသည်။
မြို့ပြခရီးသွားလုပ်ငန်းအတွက် QR ကုဒ်အမျိုးအစားများ
ကျွန်ုပ်တို့သည်အက်စတိုးနီးယားသို့ပိုမိုနက်ရှိုင်းစွာ ၀ င်ရောက်လာခြင်းနှင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းနယ်ပယ်၌ QR ကုဒ်များအသုံးပြုခြင်းကိစ္စရပ်များကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်နိုင်သည် Tallinn အတွက်သင်၏အိတ်ဆောင်လမ်းညွှန်ထဲမှာ နှင့်သူတို့၏မဂ္ဂဇင်းများကိုဖြည့်စွက်ရန် QR ကုဒ်များကိုသူတို့မည်သို့အသုံးပြုကြသည်။ သူတို့ကသူတို့ရဲ့မဟုတ်ရင်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံနှိပ်မီဒီယာမှဒီဂျစ်တယ်ဖြည့်စွက်ထည့်သွင်းနိုင်ကြသည်။ ဤ QR Code သည်ခရီးသွားaည့်သည်များအတွက်ဒီဂျစ်တယ် PDF လမ်းညွှန်နှင့်၎င်းအတွက်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော ၄ င်းတို့၏ Tallinn ၏ဆင်းသက်သည့်စာမျက်နှာသို့သွားသည်။
သူတို့ရဲ့ App ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲပါ
သူတို့ရဲ့ website ကိုသွားပါ
သူတို့ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာလိုပဲ
ခရီးသွားလုပ်ငန်းနယ်ပယ်တွင်အသုံးပြုနိုင်သည့် QR Code အမျိုးအစားများစွာရှိသည်။ ဥပမာမြေပုံများ၊ တည်နေရာများ၊ ရုပ်ပုံများ၊ လင့်ခ်များနှင့် PDF ဖိုင်များမျှဝေရန်သူတို့ကိုကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုနိုင်သည်။ ဒီနေရာမှာအရေးကြီးတဲ့အချက်ကသင် QR Codes ၏မည်သည့်အရာပိုကောင်းသည်ကိုကြည့်ရှုရန်စကင်ဖတ်စစ်ဆေးမှုနှင့်အသုံးပြုမှုများကိုလည်းခြေရာခံနိုင်သည်။
pro သိကောင်းစရာ - စွမ်းဆောင်ရည်နိမ့်ကျသည့် QR Codes များကိုအခြားအမျိုးအစားတစ်ခုသို့မဟုတ် function တစ်ခုသို့အမှန်တကယ်ပြောင်းလဲနိုင်သည်ကိုသင်သိပါသလား။ ဒါကျေးဇူးတင်ပါတယ် Dynamic QR ကုဒ်များ။ သင်သည်နောက်တဖန်တစ်စုံတစ်ခုကိုပုံနှိပ်ရန်မလိုအပ်ပါ။ ၎င်းသည်သင့်အားအချိန်နှင့်ငွေများစွာသက်သာစေနိုင်သည်။
ဖြစ်နိုင်ခြေကတကယ်တော့အဆုံးမဲ့ပါပဲ။ ၎င်းသည်သီးခြား QR Code ကျင့်သုံးရန်အဓိပ္ပာယ်ရှိသောအရာပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ပိုမိုသိရှိရန် QR Code လုပ်ရန်နှင့်မည်သည့်အမျိုးအစားသည်သင့်အတွက်သင့်တော်သနည်း.
အစိုးရများနှင့်မြို့ကြီးများအတွက် QR ကုဒ်များ
စကော့တလန်နိုင်ငံသည်ခရီးသွားလုပ်ငန်းအတွက် QR ကုဒ်များပြုလုပ်ရန်စိတ်အားထက်သန်လျက်စကော့တလန်နိုင်ငံတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘဲဝေလနယ်သားများအားလုံးကို QR Codes အသုံးပြု၍ ခရီးသွား experience ည့်သည်အတွေ့အကြုံကိုမြှင့်တင်ရန်ကြိုးစားသည်။
ကြီးမားသောဆုံးရှုံးမှုများခံစားခဲ့ရသောခရီးသွားလုပ်ငန်းကိုကူညီရန်အစိုးရများကအရေးယူဆောင်ရွက်နေသည်။ ဥပမာတစ်ခုမှာ Scottish Tourism Recovery Toolkit။ ဒီမှော်နည်းနည်းလေးကကုမ္ပဏီများအားဆုံးရှုံးမှုမှပြန်လည်သက်သာလာစေပြီးအခွင့်အလမ်းသစ်များဖန်တီးပေးသည်။ ဖြစ်နိုင်သောနည်းတစ်နည်းမှာကူးစက်ရောဂါဖြစ်ပွားပြီးနောက်ကမ္ဘာကြီးတွင်ပိုမိုထိတွေ့နိုင်သောအဖြေများဖန်တီးရန်ဖြစ်သည်။
ထို့အပြင်ခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့်အခြားအသုံးပြုမှုများအတွက် QR ကုဒ်များကိုဖန်တီးရန်စိတ်အားထက်သန်သောစကော့တလန်သို့မဟုတ်အက်စ်တိုးနီးယားနိုင်ငံများသာဖြစ်သည်။ ဝေလနယ်ကမည်သို့အသုံးပြုနေသည်ကိုအထက်ပါဗီဒီယိုကိုကြည့်ပါ QR Code Generator ကိရိယာ မြို့အနှံ့အပြားအသုံးပြုမှုအတွက် QR ကုဒ်များပြုလုပ်ရန်။
QR Code အသုံးပြုမှုသည်လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်အတွင်းပေါက်ကွဲခဲ့သည်၊ သို့သော်တုပ်ကွေးရောဂါအခြေအနေတစ်ခုလုံးသည်အဆင့်သစ်တစ်ခုသို့လုံးလုံးရောက်ရှိသွားသည်။ ၎င်းအတွက်အဓိကအကြောင်းရင်းမှာ၎င်းတို့သည်ထိတွေ့မှုနည်းပါးခြင်းနှင့်ပိုမိုဝေးကွာသောနေရာများတွင်ပိုမိုမြန်ဆန်လွယ်ကူသောအတွေ့အကြုံများကိုရရှိစေခြင်းဖြစ်သည်။
ဟိုတယ်များအတွက် QR ကုဒ်များ
ပါရီရှိ Ace ဟိုတယ်များသည်လူတို့အား၎င်းတို့၏အင်တာနက်ကို ၀ င်ရောက်နိုင်ရန်အတွက် WiFi QR ကုဒ်များကိုအသုံးပြုပြီးအခြားဝန်ဆောင်မှုများကိုတိုးမြှင့်သည်။
ပြင်သစ်နိုင်ငံပဲရစ်ကိုကူးပြီးသွားကြစို့။ ce ည့်သည်များကိုလွယ်ကူစွာအင်တာနက်အသုံးပြုနိုင်ရန် Ace Hotel သည် QR ကုဒ်များကို Wifi အတွက်အသုံးပြုသည်။ ၄ င်းတို့သည်သင်၏ဟိုတယ်ကွင်းသို့နောက်တစ်ခေါက်လာရောက်လည်ပတ်ချိန်တွင်သင့်အားအထူးလျှော့စျေးပေးသည့်ဆင်းသက်သည့်စာမျက်နှာနှင့်ပေါင်းစပ်လိုက်သည်။
ဤသည်ဟိုတယ် l ည့်ခံများကဲ့သို့သေးငယ်ဒေသများရှိ visit ည့်သည်စီးဆင်းမှုကိုလျှော့ချနိုင်ပုံကိုဥပမာကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်ကြီးမားသောပုံနှိပ်ပိုစတာနှင့် QR Code များနှင့်ပတ်သက်သည့်အချက်အလက်အားလုံးကိုထုတ်ဖေါ်ပါကခရီးသွား less ည့်သည်များကဟိုတယ်ဝန်ထမ်းများအားမေးမြန်းလိမ့်မည်။ ဆိုလိုသည်မှာအလုပ်သမားများ နည်း၍ overhead ကုန်ကျစရိတ်သက်သာစေသည်။
QR Code ဒီဇိုင်းကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ပါ
မည်သည့်မီဒီယာသို့မဟုတ်မျက်နှာပြင်အပြင်အဆင်အတွက်မဆို QR ကုဒ်များကိုအလွယ်တကူပြုပြင်နိုင်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်“ တိကျသောအရောင်များ” နှင့်“ Scan Me Now” ၏တူညီသောအရာတစ်ခုခုကိုပြောမည့်လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုကိုခေါ်ဆိုနိုင်သည်။ ကုန်ပစ္စည်းအမှတ်တံဆိပ်တိုးမြှင့်စေရန်သင်၏ကုမ္ပဏီသို့မဟုတ်စီးပွားရေးအမှတ်တံဆိပ်ကိုထည့်သွင်းခြင်းနှင့်အတိတ်ကာလကဆိုးဝါးသောအရာဖြစ်ခဲ့ဖူးသည့် QR Code ၏ရှုမြင်ပုံနှင့်ခံစားမှုကိုထည့်သွင်းခြင်းအားဖြင့်၎င်းကိုတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်လုပ်နိုင်သည်။
၀ က်ဘ်ဆိုက် QR ကုဒ်များကို QR Code Generator ဖြင့်ပြုလုပ်ပါ
သင် QR ကုဒ်များပြုလုပ်နေစဉ် QR Code ဒီဇိုင်းလမ်းညွှန်ချက်များကိုစိတ်စွဲမှတ်ထားပါ။ ဒီဇိုင်နာမပါဘဲသံသယဖြစ်မိလျှင် (သို့) စွန့်ခွာလျှင် Drake သည် Rapper ကိုမည်သို့စစ်ဆေးမည်ကိုစစ်ဆေးပါ ဘယ်လို QR Code နဲ့တူသင့်တယ်.
ခရီးသွားလုပ်ငန်းအတွက် QR ကုဒ်များ၏ဤခြုံငုံသုံးသပ်ချက်ကိုအပြီးသတ်နိုင်ရန်အတွက် QR Code အမျိုးအစားအချို့နှင့်သင်ခရီးသွားလုပ်ငန်းနယ်ပယ်၌ရှိပါကသင်၏စီးပွားရေးအတွက်မည်သို့အကောင်အထည်ဖော်နိုင်မည်ကိုကြည့်ကြစို့။
ခရီးသွားမြေပုံအတွက် QR ကုဒ်များ
ဤကော်ဖီဆိုင်သည်လူများအားသူတို့၏တည်နေရာ QR Code ဖြင့်အခြားတစ်နေရာသို့ ဦး တည်စေသည်။
ဤတွင်အသုံးပြုနေသော Tallinn ရှိကော်ဖီဆိုင်တစ်ခုဖြစ်သည် တည်နေရာ QR ကုဒ်များ။ အခြေခံအားဖြင့်မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်၊ QR Code သည် Google Maps link နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည်။ ဒီအကြောင်းကိုအထက်ဆောင်းပါးမှာဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။
ဤသည်ကိုအမျိုးမျိုးသောဖြစ်ရပ်များနှင့်အကြောင်းပြချက်များအတွက်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ မြို့သစ်သို့မဟုတ်မြို့သစ်တွင်ခရီးသွား easily ည့်သည်များအလွယ်တကူအလွယ်တကူပျောက်သွားနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်သည်သင်၏ဆိုင်သို့သူတို့ကိုအမြန်ပို့နိုင်သည့်အခါသင်၏အရောင်းအရေအတွက်တိုးလာလိမ့်မည်ဟုသင်စိတ်ချနိုင်သည်။
ခရီးသွားစျေးဝယ်များအတွက် QR ကုဒ်များ
ဤစတိုး QR Code သည်လူများအားပစ္စည်းများကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးနိုင်သည်၊ သူတို့၏စမတ်ဖုန်းဖြင့်အထူးလျှော့စျေးပေးသည်။
အရောင်းအကြောင်းပြောသောအခါငွေပေးချေမှုကိုလက်ခံရန် QR ကုဒ်များကိုလည်းအသုံးပြုနိုင်သည်ကိုသင်သိပါသလား။ အက်စတိုးနီးယားရှိဤကုန်စုံစတိုးသည်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်ဝန်ဆောင်မှုငွေပေးချေမှုဆိပ်ကမ်းတွင် QR ကုဒ်များကိုအသုံးပြုနေသည်။ လူတွေဟာစတိုးဆိုင်ထဲကဖုန်းတွေနဲ့အရာရာတိုင်းကိုလုပ်နိုင်တယ်။ ဆိုလိုသည်မှာပစ္စည်းများကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးခြင်း၊ ငွေပေးချေခြင်းနှင့်နောက်ဆုံးတွင်သူတို့၏သစ္စာရှိမှုအတွက်အထူးလျှော့စျေးများရရှိခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ ဤအရာသည်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောအသံဖြစ်ပါကစစ်ဆေးကြည့်ပါ mTasku app.
ခရီးသွားလုပ်ငန်းအတွက်ဤ QR Code ဖြေရှင်းချက်များသည်သင့် ဦး ခေါင်းကိုလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်သို့ရောက်စေလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။ ပတ် ၀ န်းကျင်ကိုလှည့်ပတ်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့် QR ကုဒ်အချို့ကိုဖန်တီးခြင်းသို့မဟုတ်စကင်ဖတ်ကြည့်ခြင်းဖြင့်သင်၏ခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့်သက်ဆိုင်သောလုပ်ငန်းများအနေဖြင့် QR ကုဒ်များမည်သို့အကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်ကိုပိုမိုသိရှိရန်အတွက်အခမဲ့ဖြစ်သည်။
အတွက် QR ကုဒ်များ ဆေးရုံများနှင့်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု
နှင့်အတူ QR ကုဒ်များ scan Pokemon
များအတွက် QR ကုဒ်များလုပ်ပါ Bitcoin
ဘယ်လို QR ကုဒ်များလုပ်နိုင် Cure Coronavirus ကိုကူညီပါ